रियल मड्रिड हार्‍यो, तर पुग्यो च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा. – Sabaikoaawaj.com
रियल मड्रिड हार्‍यो, तर पुग्यो च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा.
बिहिबार, बैशाख २८, २०७४ 7:09:13 AM	मा प्रकाशित
वैशाख २८ / साबिक विजेता रियल मड्रिड च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार राति भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा घरेलु प्रतिस्पर्धी एथ्लेटिको मड्रिडसँग २–१ ले पराजित भएपछि समग्रमा ४–२ को जितसहित रियल मड्रिड फाइनलमा पुगेको हो । घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा पहिलो हाफमा नै दुई गोल गर्दै एथ्लेटिको मड्रिडले खेलमा फर्किने राम्रो प्रयास गर्‍यो ।
एथ्लेटिकोका लागि १२ औं मिनेटमा साउल निगुएज र १६ औं मिनेटमा एन्टोनी ग्रिजम्यानले गोल गरे । २–० ले पछि परेको रियलका लागि टोनी क्रसको पासमा इस्कोले ४२ औं मिनेटमा गोल गरे । करिम बेन्जिमाको सुन्दर प्रहार एथ्लेटिकोका गोलरक्षकले बचाउ गरे । एथ्लेटिकोका केविन गामेइरोले गोल गर्ने सुन्दर दुई मौका गुमाए । इस्काले महत्वपूर्ण अवे गोल गरेपछि अग्रता लिए पछि पहिलो लेगमा अवे मैदानमा ३–० ले पराजित भएकाले फाइनल पुग्नका लागि एथ्लेटिकोले थप तीन गोल गर्नु पर्ने थियो । तर उसले थप गोल गर्न सकेन र रियल मड्रिड समग्रमा ४–२ ले विजयी हुँदै फाइनलमा पुग्यो ।
पछिल्लो चार सिजनमा तेस्रो पटक फाइनलमा पुग्ने एथ्लेटिको सपना टुट्यो । रियल मड्रिडले अब उपाधिका लागि फाइनलमा इटालियन क्लब युभेन्टससँग आउँदो जुन ३ मा कार्डिफमा खेल्ने छ । यसपटक पनि उपाधि जिते रियल मड्रिड लगातार उपाधि जित्ने पहिलो टिम बन्नेछ ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, बैशाख २८, २०७४ 7:09:13 AM